ikhaya » iindaba » I-facilis iphumelela ngaphesheya kwe-Atlantic neReef
I-facilis iphumelela ngaphesheya kwe-Atlantic neReef
HUDSON, MA (Septemba 12, 2017) - "Ukuphumelela inamba yezihlandlo zokuphinda Facilis I-TerraBlock igxininisa ukunyamekela okuqhubekayo kwenkqubo yokugcina eyabelana ngokukodwa kwaye ixabiso elininzi, "kutsho uDan Muchmore, uMlawuli wezoThengiso weTyllll CCT. U-Moremore wayebeka ingxelo kwiindaba ezimbini zeemfuno ezintsha Facilis izisombululo zokugcina zokunxibelelanisa izixhobo zokunxibelelana kweendaba eziseLondon, iAlantic Productions kunye neReef Television.
Zombini iinkampani zibeke imiyalelo yokudlulelwa kwezinto ezikhoyo Facilis inkqubo zo kugcina ezabelwana. Ezi nkqubo zichaziwe, zithunyelwa zithunywe nguTyllll CCT, Facilis'iqabane likarhulumente wendawo e-UK.
KwiReef Television, zabo ezintsha Facilis inkqubo yokugcina ithatha indawo yokugcina i-DDP inkqubo eyayizuze inkampani ngokuhlanganiswa kwenkampani. Ukwandiswa Facilis Inkqubo yokugcina eyabelanayo iya kwenza iReef ukuba ixhase inani labathengi abongezelelweyo, isebenza kwintanethi yabo kwaye bafumane iimfuno zabo zokugcina imithombo yeendaba.
"Kwakudingeka sikhulise amandla ethu okugcina usebenzisa iteknoloji ehambelanayo nenjongo kwaye ibonisa isisombululo esinempumelelo kwi-shishini lethu," kuchaza uMichael Sunderland, iNtloko yeZibonelelo kwi-Atlantic Productions. "Senze ukunyamekela ngokufanelekileyo kuzo zonke izisombululo zathengisi ezahlukeneyo kunye Facilis yayikukhethiweyo. Njengomsebenzisi oselekhoyo, sinesiqinisekiso sokuthi inokuthenjwa kwenkqubo kunye nokukwazi ukuxhomekeka kunye nezinye izisombululo ezimele utyalo-mali. "
Kwi-Atlantic Productions, iNyunithi yokuThuthukiswa kweTerraBlock yenza inkampani ivelise iiprojekthi ezongezelelweyo endlwini kwaye iqhubeke neeprojekthi ezikhoyo kwi "edit live" kwisitoreji sokugcina. Inzuzo yeCandelo loKwandisa kukuba abasebenzisi abadingi omnye umncedisi ukuba imfuno yokuqhuba iyona mandla okugcina.
"Facilis kunye noTyrell baqonda ibhizinisi lethu, "kusho u-Dominik James, iNtloko yePost Production kwiReef Television. "Baqonda iimfuno zobugcisa ezifunekayo ukuxhasa abasebenzi bethu ngokuqhubekayo basebenzisana nokusebenza kwemilinganiselo yokusebenza kwedatha. Kwaye baqonda ukunyaniseka kwezoshishino namhlanje, apho sifuna ukukwazi ukulinganisa nganye iipounds zebhajethi yethu yotyalo-mali. "
Facilis I-TerraBlock: iindleko ezifanelekileyo zezobuchwepheshe
Ukubonakaliswa ngokokuqala ngqa eYurophu kwi-IBC 2017, i-Version 7.0 Facilis'TerraBlock ibonisa Ubungakanani ukuqhubela phambili kwinkqubo yokulondoloza eyabelwayo yenkampani kunye neeyunithi ze-3,000 ezifakwe kunye namawaka eesihlalo kwiindawo ezikhoyo kwihlabathi jikelele. Ukususela ekuqaleni kwayo kwi-2003, Facilis uye wahlala enyanzelekile kumsebenzi wayo wokuphuhlisa iindleko ezisebenzayo, izicwangciso zokugcina izakhono ezihlangeneyo zokunxibelelana kwemveliso yamashishini, kunye ne-7.0 ingumzekelo oyintloko.
NgeNew Web Console, Facilis kuphucula ukhululo lokusetyenziswa, kuphucula ukuhlanganiswa kwe-IT, kwaye ngokuqinisekileyo utshintshe ukulindela kwabalawuli benkqubo. I-Web Console ihambisa iimpawu abathengi abazange bacinge ukuba zinokwenzeka, kwaye bakwenza ngaphandle kokunyaniseka.
Abasebenzisi bokugqibela baza kubona isistim somsebenzi esisiseko esekelwe kwisiphequluli kunye neselula, esongezeleleka ekuthokoziseni nasekuphenduleni, ivumela amanqanaba amakhulu okulawula kunye nokuguquguquka. Ukulawulwa kwemvume engaphezulu kwegranular kuvumela abasebenzisi ukuba bangene ngemvume ngeakhawunti ezininzi ezikhuselweyo nge-password kwiziko lokusebenzela elifanayo, okuvumela ukufikelela ekunyuseni inani lemithombo yeprojekthi enikwe. Ukuba enye indlela yedatha iyancitshiswa, iinkqubo zabaxhasi ziza kukhwela kwindlela yesibini okanye yesithathu, kugcinwe uxhumano kunye nokugcina umsebenzi kumzila.
Okokuqala kwenkqubo yolu hlobo, iWebhu yekhonsoli inika amandla kunoma yimuphi umsebenzisi kwi-Ethernet okanye kwiSiteli seFiber ehlangene nezixhobo zokusebenza Facilis imiqulu njengezixhobo zonxibelelwano okanye iimoto zendawo. Ekubeni ukubonakala kwevolumu kwishintsha ukuziphatha kwe-OS kunye nesicelo, le nto ibaluleke kakhulu kubasebenzisi abafuna ukwandisa ukuphendula kwezicelo zabo. Lo mbandela uqhubeka uhlula Facilis Inkqubo yeFayile ekwabelwanayo ukusuka kwiifayile zefayile zeenethwekhi, kunye Facilis kubanikezeli bokugcina inethiwekhi.
Abalawuli banomdla wokuqapha kwamanqwanqwa abasebenzisi bamandla kunye nokugcinwa kwemisebenzi, kunye nokunikezelwa kwengxelo kwiseva kwideshibhodi yesistim. Umqulu wendalo, ukutshintsha ubukhulu kunye nokususwa, kunye nazo zonke izenzo zemvume zingagqitywa kunoma iyiphi nayiphi na ifowuni eyenziwe, kubandakanywa izixhobo zeselula. Umlawuli unamandla okongeza (phokoza) kwaye ususe (ukudonsa) imiqulu evela kwideskithophu nayiphi na umxhasi oxhunyiwe, ukulawula konke ukulawula indawo. I-LDAP ephuculweyo kunye nokuhlanganiswa kwe-Active Directory kubandakanya ukulandelwa kwexesha langempela lomsebenzisi, ukuphepha ukufuna ukugcinwa kweenkcukacha zolwazi oluchanekileyo.
Nge-Hub Hub entsha, Facilis ligxininisa kulabo basasazo kunye nezixhobo ezifuna ukukhulisa umxholo wazo wokuhanjiswa kwebhajethi ye-CAPEx. Ngokuphindaphinda iinkqubo ezikhoyo kwiiyunithi zokugcina ezisekupheleni, iseva yeH Hub ikhulula umthwalo wokusebenza owandayo kwiprojekithi yala manqaku adala. Ukusebenza okubangelwayo kukuphindaphinda kabini kwimeko yangaphambili. Ngokuhlanganiswa kokuxhumeka, ukulinganiswa kwemilinganiselo yeeprojekthi kunye nabasebenzisi, kunye nokuhlanganiswa kwezixhobo ezininzi ze-server, iseva yeH Hub yenza kakuhle Facilis'thembisa ukuxhasa abo bathengi ngexesha lokuphila kotyalo-mali.
Vula i-Attachment Storage
Facilis Iifayile yeFayile ekwabelwanayo yinkqubo yefayile efakwe kakuhle kakhulu kwi-video kunye nokuveliswa komxholo wee-audio, kwaye ngoku ke amandla angasetyenziswa kwi-3rd-wahlula ukugcina impahla. Amaninzi amaninzi aneendlela zokugcina ezahlukeneyo ezisetyenziselwa njengendawo eqhotyoshelweyo okanye umncedisi womnatha-uqhotyoshelweyo. Oku kugcina kungaphila ubomi obutsha kunye nokufumaneka Facilis Vula i-Attachment Attachment (OSA). Ilayisenisi ngumthamo, ininzi yeSAS kunye neFiber Channel egcinwe kuyo ifanelekile ukusetyenziswa kunye namaseva we-TerraBlock kunye neeHuba. Oku kunika abathengi bethu ithuba lokubambisana kunye nokuxhuma, kunye namandla amakhulu kunokuba banakho ukukwazi ukufikelela kwi-key-key system.
Izixhobo zangaphandle zigcinwe ngeemvume ngokusebenzisa inkqubo yefayili ebelwanayo, kwaye ibhalwe ngabasebenzisi abaninzi kwi-Fiber Channel kunye ne-Ethernet. Facilis ihlala yodwa umkhiqizo wokubonelela inkqubo yefayili ebelwanayo phezu kwe-Ethernet kunye neTiber fibre ngaphandle kweelayisensi zokuhlala okanye ukukhawulelwa kwezihlalo.
ukudityaniswa Imveliso yokuposa ITeknoloji yeTV	2017-09-12
Previous: I-Amino iqinisekisa iiAria ezixhobo kunye ne-Minerva 10 yesikhulumi se-TV esiphezulu
Hey Buddy !, Ndifumene le ngcaciso kuwe: "Facilis Succeeds Overseas ngeAlantic & Reef". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/facilis-succeeds-overseas-with-atlantic-reef/. Enkosi.